.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Photo Collage Maker 1.6 Full Version
Photo Collage Maker 1.6 Full Version
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ကိုယ့် ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ဒီဇိုင်း အလန်းလေးတွေဖြစ်အောင် ပြင်ချင်ရင် သုံးရတာလွယ်ကူပါတယ်။
နောက် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ပုံလေးတွေ ပြင်ပေးချင်ရင်ရော ၊ မွေးနေ့တွေ ၊ သတိရတာတွေ ၊ ကလေးပုံလေးတွေအတွက်ပါ
ဒီဇိုင်းတွေက အရမ်းကို စုံလင်လှပါတယ်။ အရမ်းကို လှပတဲ့ Frame တွေအများကြီးပါသလို ၊ စာလေးတွေလည်း ရေးပြီး
ထည့်ချင်ရင်ရော ရပါတယ်နော်။ ပုံလေးတွေကို စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ပြီးလို့ သိမ်းမယ်ဆိုရင်လည်း ပုံဖော်မက်တွေရော
Flash ဖိုင်[ .swf ] နဲ့ရော PDF ဖော်မက်နဲ့ပါ သိမ်းလို့ရပါတယ်။ အောက်မှာ Screenshot လေးတွေ ပြပေးထားပါတယ်။
ကိုယ့်ပုံလေးတွေ ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေ ပြင်ချင်ရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ပုံလေးတွေကို ပြင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ဟောဒီ Photo Collage Maker ဆော့ဝဲလ်လေးသာ ဆောင်ထားကြပေတော့ဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 25 MB ပဲ ရှိပါတယ်။
မူရင်းဆော့ဝဲလ်က Patch ဖိုင်နဲ့လုပ်မှ Full Version ဖြစ်တာဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး သုံးရလွယ်သွားအောင်
ကျွန်တော် Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာလေးကိုပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်နော်။
Download: Photo Collage Maker 1.6 Full Version
ဆော့ဝဲလ်ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါင်းထားတဲ့ .rar ဖိုင်လေးကို Right Click >> Extract Here လုပ်လိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင် Photo Collage Maker 1.6 ဆိုတဲ့ Folder လေးတစ်ခု ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အောက်က ပုံလေးထဲမှာ
မြားထိုးပြထားတာက ဆော့ဝဲလ်ပါ။ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပို့စ် (သို့မဟုတ်) ဒီဆော့ဝဲလ်ဒေါင်းလုပ်လင့်ကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ကူးယူမျှဝေမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးပါ။ ကိုယ်တိုင် တင်ထားသလိုလိုနဲ့ နာမည်ကောင်းလိုချင်သူများ ဒီမှာ ကြည့်ပါ။
Posted by Thurainlin at 10:51